Abbootiin Irree Odoo Dhaadatanuu Hallayyaa Bu’u ! | QEERROO
Abbootin irree baayyeen osoo dhaadatanuu, osoo gaafii ummataa qixa sirriin deebisuurra humnaan ukkaamsuun bara bittaa dheereeffachuuf carraaqanu hallayyaa hin deebine bu’aa turan, bu’aas jiru. Keessumaa abbootiin irree Afrikaa fedhii fi heyyama ummataa malee qawwee fayyadamanii aangoo humnaan qabatan hundi isaanii jechuutu danda’amaa odoo dhaadatanuu, odoo rorrisanuu irree ummataatin daaraa botoroo ta’aa tura. Ta’aas jiru. Hundii isaanituu aangoo humnaan qabatan quufnee wallaaluun akka qawween Koran qawween harcahaniiru. Baayyeen isaaniis du’a saree abbaa hin qabnee du’anii hafaniiru. Wayyaaneen har’a qawween harkaa qaba jettee ummata Oromootti dhaadachaa fi roorrisaa jirtus kan ishii eeggatu kanuma. Akka rorriftetti hin haftu.
Qawwee harkaa qabna, carraa arganneerra jedhanii ummata sivilii irratti roorrisuun, dhaadachuun yoo gaafii mirgaa kaase ajjeesuun, saamuun yakka, sammuu dhabuudhasii. Beekaan gaafii ummataaf gurra laata, dhaggeeffatee deebii barbaachisaa ta’e kenna. Kan akka wayyaanee garuu gaafii sirrii fi mirga uumamaa ta’e kan ummattoonni biyyattii keessumaa Ummanni Oromoo kaasaa turee fi jiruuf deebiin ishiin waggoottan 26n darbaniif keessumaa ammoo waggoota 2 as deebisaa turte waraana amma funyaanitti hidhate bobbaaftee kaa’imman Oromoo rasaasaan harcaasuudha. Guurtee mana hidhaatti darbuudha. Biyyaa godaansisuudha.
Addunyaan har’aa abbaa irree kamiifuu iddoo hin qabdu, jaalalaa fi fedhii malee ummanni bara baraaf bittaa jala qawween jiraatus hin jiru, jiraachus hin qabu. Jiraachisna jedhaniyyuu hin danda’amu.
Deemsi fi fedhiin akkasiis waan yeroon itti darbee fi fudhatame hin qabneedha. Humnaan nama ajjeesaa, hidhaa fi dararaa nan bulchaan gongumaa hin danda’amu, yakkasii. Oolee haa bulu malee shakkii malee seeraanis seenaaniis nama gaafachiisa.
Dhugaan lafarra jiru kan argisiisu Wayyaaneetti xumura gochuuf sochiin walirraa hin cinne, Fincilli XG finiinee itti fufuu dha.
Wayyaaneen afaaniin jira, jira jettee haa dhaadattu, haa bookistu malee qabatamaan hin jirtu, bakkaa hiiqxee jirti, qabsoon Oromoo bakkaa hiiksee jira. Har’a labsii yeroo muddamaa baafteen waraana bobbaaftee jiraachaa jirti. Yoo midiyyaarraa bookkistu, dhaadattu jabaa of fakkeessuuf haa yaaltu, haa hololtu, jabaan ana caalu hin jiru jettee yaa odeessitu malee keessi ishii oneera, sodaan , dhiphuun gutamtee jiraachaa jirti. Dhugana lafarra jirus kanuma mirkaneessa.
Abbootiin irree biyya kam keessattuu amala itti ta’ee yoo xumurra jala gahan caalaatti dhaadatu, jabaa fakkaatanii muldhachuu barbaadu, ni bookkisu. Haa ta’uutii osoo dhaadatanuu, jabaadha ofiin jedhanuu yoo irree ummataatiin hallayyaa bu’an argaa turre, argaas jirra.
Murna osoo hallayyaatti gulufaa jirtuu afaaniin dhaadattu, kan keessi ishii burkutaayee fi abdii kutatte tana gulufa ishii kana caalaatti saffisiisuuf wanti cunqurfama ahundarraa eegamu ni jira. Innis cunqurfamtoonni impaayeera itiyoophiyaa keessatti bulchiinsa wayyaanee jalatti mankaraaraa jiran keessumaa ummanni Oromoo osoo hidhaa, dararaa fi ajjeechaa akkasumas holola wayyaaneen gaggeessitu kanaaf iddoo hin laanne qabsoo eegale ,FXG finiinsee itti fufuudha. Eeyyee ummanni Oromoo keessumaa ilmana isaa qeerroon FXG jabeessanii itti fufuudhaan Wayyaanee waggoota 26n darbaniif ajjeechaa, saamicha, fi dararaa raawwataa turte xumura itti gochuun dubbii fardii fi dirqama lammummaati. Falli abbaa irree jalaa bilisa nama baasus kanumaa fi kana qofa waan ta’eef